Cunug bil jir ah oo ay dhaawacyo HALIS ihi soo gaareen & HOOYADII oo loo haysto! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Cunug bil jir ah oo ay dhaawacyo HALIS ihi soo gaareen &...
Cunug bil jir ah oo ay dhaawacyo HALIS ihi soo gaareen & HOOYADII oo loo haysto!
(St. Paul, MIN) 31 Agoosto 2019 – Haweenay Soomaali ah oo ku nool magaalada St. Paul ayaa xabsiga loo taxaabay kaddib markii Isbitaalka Carruurta la dhigay cunug ay dhashay oo qaba dhaawacyo halis ah, shalay subaxdii.
Booliiska St. Paul Police ayaa sheegay in Hibaaq Axmed Maxamed, oo 21-jir ah, ay isbitaalka keentay cunug bil jir ah oo ay dhashay in yar uun kahor abbaarihii 6 a.m., iyadoo sheegtay inay wiilka seexisey kaddibna markii ay toostay ay ugu tagtay sagxadda musqusha qolka aabbihii isagoo qaawan, qoyan isla markaana qaboow.
Hibaaq waxay intaa raacisey in cunugga yari uusan wax dhadhaqaaq ah lahayn xilligaasi, sidaa darteedna ay isbitaalka ula soo carartay.
Yeelkeede, dhakhaatiirta iyo howlwadeenka caafimaadka ayaa Booliiska u sheegay in dhaawacyada cunugga ku yaallaa aysan ahayn kuwo shil ku yimid, waxaana la geliyay qaybta Daryeelka Deg Degga ah ee ICU.
Hibaaq ayaa sheegtay inay dhici karto in wiil isaga ka wayn oo 2-jir ihi uu isku dayay inuu u qubeeyo, balse markii dambe iyada ayaa loo xirey tuhunka arrintan.
Ilmaha yar ee dhibku soo gaarey oo wiil ah ayaa la filayaa inuu badbaado, balse waxaa soo gaarey dhaawacyo xun oo halis ah, sida lafta boowdada oo uu ka jaban yahay, lafta dhakada oo tarrarsan iyo weliba dhiig bax maskaxeed.
Weli xog kale oo intaa dhaafsiisani sooma bixin.
Previous articleSOMALIA-KENYA: ”Aadan Barre Ducaale waa sida ninkii ratigiisii ganaaxey oo kale!!” + Muuqaal
Next articleOromo fara ba’an ku haysa degaanno ka tirsan Soomaali Galbeed & ciidamada DF oo garab siinaya! (Maxaa hadda dhacay?!)